Nagu saabsan - Dingzhou Yunlingyu Isboortiga Alaabada Co., Ltd.
Dingzhou Yunlingyu Isboortiga Alaabada Co., Ltd.
Dingzhou Yunlingyu Sports Badeecooyinka Co., Ltd. waa go'an naqshad, horumarin, soo saarid, iibinta mid ka mid ah ganacsiyada laf-dhabarka. Shirkadeena waxay bixisaa noocyo kala duwan oo isboorti ah si loo daboolo baahiyahaaga kala duwan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa Dumbbell, Miisaanka Culeyska, Barbell, Rack Rack, Smith Machine, Bench, Kettlebell. Qeexitaanka alaabtu waa dhameystiran tahay, qaabdhismeedku waa sheeko, farshaxanimadu waa wax fiican, ogaanshaha ayaa dhameystiran, tayada ayaa ka sarreysa.
Goobta shirkaddu ku taal waxay ku dhowdahay 4500 mitir murabac, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 50 shaqaale, oo ay ku jiraan ilaa 30 shaqaale aqoon sare leh. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay kormeerka waaxda kormeerka tayada.
Shirkadeena waxay leedahay daraasiin shati, waxay leedahay koox R & D u gaar ah, badeecooyin kala duwan oo casri ah. Qalabka isboortiga, qalabka jimicsiga gudaha iyo dibedda ee ay soo saartay shirkaddu waxaa lagu qiimeeyay inay yihiin badeecooyin caan ah.
Wax soo saarkayaga waxaa lagu iibiyaa adduunka oo dhan, badanaa Maraykanka, Ingiriiska, Australia, Jarmalka, Koonfur Afrika, Hindiya. Tayada wax soo saarka si aad ah ayaa u aqoonsan yihiin macaamiisha, iyo sidoo kale soo horjeedyo badan.
Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa "tayada ugu horreysa, marka hore macmiilka, sumcadda ku saleysan" siyaasadda ganacsiga, oo loogu talagalay inay daboosho baahiyaha macaamiisha. Marka loo eego isbeddelka aan la adkeysan karin ee caalamiga ah, shirkadeenu waxay diyaar u tahay inay si daacadnimo leh ula shaqeyso shirkadaha adduunka oo dhan si loo gaaro guul-guul-guul.
Waxaan ku faaneynaa inaan u socono masaafada dheer macaamiisheena oo aan soo saarno tayo sare iyo qalab jimicsi. Falsafadeena waa inay ka badnaato uun shirkadaada qalabka jimicsiga. Iyadoo loo marayo cilmi baaris cilmi ah waxaan dooneynaa inaan ku taageerno intaad safarka ku jirto si aan u gaarno yoolalkaaga jimicsiga guud. Si tan loo sameeyo waxaan ku siin doonaa qalab taam ah oo tayo sare leh, qoraalo joogto ah oo blog ah iyo waxyaabo kale oo badan!
Fiiro gaar ah noo
Waxaan si dhakhso ah u ballaarinaynaa iyo sidoo kale kala duwan our! Waxaan haynaa badeecooyin cusub oo imminka la soo saarayo dhawaana waxay ku jiri doonaan khaanadaha. Nagala soco Warbaahinta Bulshada si aad u hesho dhammaan wararkii ugu dambeeyay!